Maleeshiyada Al-Shabaab oo magaalada Goofgaduud ka qabsatay ciidamada dowlada Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMaleeshiyada Al-Shabaab oo magaalada Goofgaduud ka qabsatay ciidamada dowlada Soomaaliya
October 30, 2016 Abdi Omar Bile Somalia 0
Koox hubaysan oo katirsan Al-Shabaab. [Sawirka: AP]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa maanta oo Axad ah ka qabsatay ciidamada dowlada Soomaaliya magaalada Goofgaduud oo kutaala koonfur-galbeed Soomaaliya, sida ay sheegeen saraakiisha.
Sarkaal dhanka amaanka ah oo katirsan dowlada Soomaaliya oo codsaday in aan magaciisa la sheegin aya Puntland Mirror u sheegay in magaalada ay gacanta maleeshiyada ku dhacday saakay oo Axad ah.
Afhayeenka Al-Shabab u qaabilsan howlgalada milatariga, Shiikh Cabdicasiis Abu Muscab ayaa xaqiijiyay in kooxda ay qabsatay magaalada, sida ay ku warameen warbaahinta taageerta Al-Shabaab.
Goofgaduud waxay dhanka waqooyi-galbeed ka xigtaa qiyaastii 245km caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Qabsashada Goofgaduud ayaa imaanaysa asbuuc kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay la wareegeen magaalada Tiyeeglow ee kutaala koonfur-galbeed Soomaaliya kadib markii ay ciidamada Itoobiya ka baxeen.
January 16, 2018 Maleeshiyada Al-Shabaab oo Mukhtaar Roobow ku eedaysay in uu riddoobay ayna banaantahay in la dilo
June 6, 2018 Labo xildhibaan oo katirsan Hir-Shabelle oo lagu dilay weerar gaadmo ah oo ka dhacay meel u dhow Muqdisho